Qiimeeyaha Sare ee Fidista Forex - Ganacsiga Ugu Wanaagsan ee Forex Weydiisa Dukayaasha
Home / About / Waa maxay sababta FXCC? / faafo
Mid ka mid ah habka aan u isticmaali karno, si aan u fahanno fikradda faafinta suuqa kala iibsiga, waa in la tixgeliyo waqtiyada aan bedelno lacagta lacageed ee isbeddelka. Dhamaanteen waanu oganahay inaan badalno lacagta lacageed ee dalkeena lacagaha fasaxa; lacagta euros, doollar euros, euro si ay u cusboonaysiiso. Daaqada ku taal xafiiska ayaa isbeddelaya, ama guddiga elektaroonigga ah, waxaan arki doonaa laba sicir oo kala duwan, xafiiska ayaa si wax ku ool ah u tilmaamaya; "Qiimahaas ayaan iibsanaa waxaana iibineynaa qiimahaas." Xisaabinta degdeg ah ayaa muujinaysa in ay jirto farqi u dhexeeya qiimaha iyo qiimaha halkaa; faafitaanka, ama komishanka. Tani waxay noqon kartaa tusaale ahaan qaabka ugu fudud ee faafinta caarada ah ee aynu ku aragno nolol maalmeedka.
Qeexitaanka fudud ee "faafinta" waa farqiga u dhexeeya iibka iyo iibinta qiimaha amniga. Waxaa sidoo kale loo tixgelin karaa mid ka mid ah kharashyada ganacsiga marka ganacsiga la sameynayo. Faafinta suuqa suuqyada waxaa lagu qeexi karaa farqiga u dhexeeya iibsashada kala duwan iyo qiimaha iibka ah ee bixinta lacagta lammaanaha gaarka ah. Ka hor intaan wax ganacsi ah haysanin faa'iido, ganacsatada forex waa inay marka hore ka xisaabiyaan kharashka faafitaanka, si toos ah looga jaray duufaanta. Faafidda hoose waxay si dabiici ah u hubisaa in ganacsiyada guuleysta ay u guuri doonaan dhul faa'iido leh horaantii.
Maalgashadayaasha suuqyada maalgashadayaasha ayaa wali ku beddelaya hal lacag oo mid kale ah, ganacsiga hal sawir oo kale. Ganacsadayaashu waxay isticmaalaan lacag gooni ah si ay u qaataan jago iyo lacagta kale, iyagoo sharraxaya inay hoos u dhacayso ama kor u kacayso. Sidaa darteed, lacagaha ayaa lagu soo xigtay qiimaha ay ku leeyihiin lacag kale.
Si aad u muujiso warbixintan si sahlan, lacagta waxaa mar walba laga soo xigaa labo-labo, tusaale ahaan EUR / USD. Lacagta ugu horreysa waxaa lagu magacaabaa lacagta aasaasiga ah iyo lacagta labaad waxaa lagu magacaabaa miiska, ama calaamadda lacagta (saldhiga / xigashada). Tusaale ahaan, haddii ay qaadatay $ 1.07500 si ay u iibsato € 1, muujinta EUR / USD waxay u dhigantaa 1.075 / 1. EUR (euro) wuxuu noqon lahaa lacagta aasaasiga ah iyo USD (doolar) waxay noqon lahayd xigashada, ama lacagta sarrifka.
Sidaa daraadeed taasi waa mid toos ah, guud ahaan, habka loo isticmaalo in lagu soo sheego lacagaha suuqyada ee suuqa, hadda bal aynu eegno sida faafitaanka loo xisaabiyo. Qiimaha Forex ayaa had iyo jeer la bixiyaa "dalbashada oo waydiiso" qiimaha, ama "iibsashada iyo iibinta" tani waxay la mid tahay waxa maalgashadayaal badani ogaan doonaan haddii ay waligood iibsadeen ama iibiyeen sinnaanta; waxaa jira qiimo kala duwan oo lagu iibiyo saamiga waxaana jira qiimo kala duwan oo lagu iibsado saamiga. Guud ahaan faafitaanka yar yar waa faa'iidada dacaayadda ee macaamilka, ama guddiga.
Dalabku wuxuu ka dhigan yahay qiimaha uu bangiyuhu doonayo inuu soo iibsado lacagta aasaasiga ah (euro ee tusaalaheena) bedelka lacagaha lidka ku ah dollarka. Taa bedelkeeda, qiimaha weydiisanku waa qiimaha uu bangiyuhu doonayo inuu iibiyo lacagta asaasiga ah ee lagu beddelayo lacagta lagula dagaallamo. Qiimayaasha sicirka badiyaa waxaa lagu soo xigtay iyada oo la adeegsanayo shan lambar. Marka, tusaale ahaan, aan dhahno waxaan ku iibinay qiimaha bidix ee EUR / USD 1.07321 oo weydii qiimaha 1.07335, faafitaanka wuxuu noqonayaa 1.4.
Faafinta isku dhafan oo ka soo horjeeda qiimaha dhabta ah ee suuqa
Hadda waxaan sharxnay waxa faafaya iyo sida loo xisaabiyo, waxaa muhiim ah in lagu yareeyo farqiga u dhaxeeya macmiilaha caadiga ah ee suuqa kala iibsiga ee kala duwan ee xayeysiiska ah, iyo sida ECN - STP ay u shaqeeyaan (sida FXCC) in suuqyada runta ah ay ku fidaan. Iyo sida sarkaal u shaqeynaya qaabka ECN - STP waa xulasho sax ah (murugo kali ah oo kaliya xulashada) ganacsatada kuwaas oo tixgelinaya xirfadlayaasha.
Qaar badan oo ka mid ah ganacsadaha dhaqameed ee suuqa dhaqaaluhu waxay soo bandhigi doonaan waxa ay u adeegsanayaan "hooseeya, go'an, faafin," sida faa'iido u leh ganacsatada tartiib tartiibka ah. Si kastaba ha noqotee, xaqiiqadu waxay tahay in faafinta kala duwan aysan bixin karin faa'iido weyn oo marar badanna laga yaabo in ay marin habaabiso, iyada oo loo marayo kuwa sameeya suuqa (qeexidda) inay sameeyaan suuqooda iyo suuqa dhexdiisa si ay uga faa'iideystaan ​​faa'idadooda.
Sumeeyayaasha suuqyadu waxay adeegsan karaan xeelado sida ballaarinta faafidda; hab xeelad ah kuwa daba jooga ee macaamiisha ah ee miiska saaran Isku-hagaajinta faafinta iyagoo bixiya macaamiishooda marka ganacsiyada macmiilka ay ka soo horjeedaan dulmiga. Ganacsadaha ayaa laga yaabaa in ganacsiga laga dhigo waxa ay u arkaan in uu yahay faafinta halbeeg joogta ah, hase yeeshee, faafitaankaasi wuxuu noqon karaa saddex pips meel ka baxsan qiimaha dhabta ah ee suuqa, sidaas darteed faafidda rasmiga ahi waa (dhab ahaantii) afar pips. Marka loo barbardhigo ECN si toos ah iyada oo loo marayo qaabka waxqabadka, halkaas oo ganacsadaha amarku ay u dhiganto ka qaybgalayaasha ECN, waxay u muuqataa sida ay muhiim u tahay ganacsatada tafaariiqlayaasha, kuwaas oo doonaya in loo tixgeliyo xirfadlayaasha, si ay u dhistaan ​​xirfado iyada oo loo marayo jawiga ECN.
Qodobka ganacsi ee ECX / STP ee FXCC marnaba soo bandhigin faafin go'an, qaabkani wuxuu bixiyaa soo jeedin-weydiiyo qaylo-dhaaneed oo lagu soo ururiyo ballan-qaad ballaaran oo ka mid ah odorosayaasha; inta badan bixiyeyaasha kumbuyuutarka ee hoggaamiya. Sidaa daraadeed faafinta bixinta waxay mar walba si sax ah u muujineysaa iibsashada dhabta ah ee iibka iyo qiimaha iibka ah ee labada nooc oo lacag ah, hubinta in maalgashadayaashu yihiin Forex ganacsiga iyada oo xaalado suuqyada dhabta ah ee dhabta ah ee sahayda dhabta ah iyo dalbashada xuduudaha.
Faafin xadidan waxay u egtahay sida wax fiican marka xaaladaha suuqa ay yihiin kuwo ku habboon, waxaana jira baahi weyn iyo dalab. Xaqiiqdu waxay tahay, faafin xadidan ayaa weli taagan xitaa marka xaaladaha suuqyada aysan aheyn kuwa ugu fiican oo aan loo eegin waxa ah iibsashada iyo iibka dhabta ah ee wax kasta oo la siiyey Labada nin lacag waa.
Nidaamkayaga ECN / STP wuxuu siinayaa macaamiishayada si toos ah u gali kara ka qaybgalayaasha suuqyada kale ee Forex (tafaariiq iyo shirkad). Uma tartano macaamiishayaga, ama xitaa ka ganacsan iyaga. Tani waxay macaamiisheena siinaysaa faa'iidooyin badan oo ku saabsan suuqa kala iibsiga miiska:
Fidiyo aad u adag
Heerarka qumman ee wanaagsan
Ma jiro khilaaf xiiso u dhaxeeya FXCC iyo macaamiisheeda
Looma xaddidno xayiraadda
Maya "ugaadhsiga luminta luminta"
FXCC waxay ku dadaaleysaa inay macaamiisheeda u soo bandhigto heerarka ugu tartameysa oo ay ku faafaan suuqa. Tani waa sababta aan u maalgelinnay sameynta xiriiryo leh bixiyeyaasha xisbiyada lagu kalsoon yahay. Faa'iidada ay macaamiishayadu leeyihiin waa in ay galaan garoonnada forex ee shuruudo isku mid ah sida hay'adaha maaliyadeed ee ugu weyn.
Qiimayaasha waxaa laga soocaa bixiyeyaasha kala duwan ee shirkadaha qandaraas-bixinta si ay u noqdaan Qiimeeyaha Qodobka FXCC ee ka dibna qiimaha ugu sarreeya ee BID iyo ASK laga soo iibsado sicirrada soodhaweynta iyo boosteejooyinka qiimaha ugu fiican BID / ASK ee loogu talagalay macaamiisheenna, sida lagu muujiyey jaantuska hoose ee hoos ku xusan.